I-Wholesale White PE Plastic Tunnel Greenhouse 8x3x2m Itende neGreenhouse | I-Winsom
Iziqephu ze-10-16 Izingcezu ezingama-30-49
> = Izingu-50
Le ndawo ebamba ukushisa inembozo egcwele ngokuphelele ingadala indawo efudumele nenamazinga aphezulu omswakama, ongakusiza ukuthi ukhulise izinhlobo ezahlukene zezitshalo.
2) Isembozo sisebenzisa izinto ezisindayo zomzimba ezisindayo ezisobala ezivikelekile ze-UV ezivikelwe ne-100% ezingavunyelwa manzi.
3) Isicabha se-Zippered sokufinyelela okulula kusakhiwo sokuhamba-ngaphakathi kwe-greenhouse.
Inombolo Model WS-GH832
Igama lento I-White Pe Plast Tunnel Greenhouse 8x3x2m
Usayizi Womkhiqizo I-26x10x7ft (8x3x2m)
Umbhalo ongaphezulu Izikhala eziyi-140gsm ezimhlophe ze-PE
Uhlaka lwe-spec. Dia 25/19 * 0,8mm amashubhu wensimbi egqinsiwe
Lokhu kugcina ukushisa kukhulisa isikhathi sakho sokukhula ngokuvikela unyaka, izithombo zonyaka, izithombo, imifino nezitshalo ezintekenteke emakhazeni. Abamba ukushisa kwethu basebenzisa ukwakhiwa komhubhe ukwenza kube ntofontofo futhi kube lula ukunakekela nokuphatha inani elikhulu lezitshalo.
I-greenhouse isisetshenziselwe uhlaka lwensimbi enesisindo esindayo nezintambo zomhlabathi eziqinile nezingqimba zomhlaba zakha isimo esitebekile, esinokwethenjelwa singahlala isikhathi eside, asikho isidingo sokukhathazeka ngokugqwala nokubola. Ifakwe futhi ngamashubhu ama-4 slant bracing, namashubhu aqinisiwe maphakathi okuqina okuzinzile.
Izithombe ezinemininingwane eminingi zizokunikeza ukuqonda okuphelele kwemikhiqizo yethu. Isembozo esingaphezu kwemvelo esizungeze i-greenhouse senza i-greenhouse ifinyeleleke futhi ivikeleke, igqekeze enhlabathini, noma isebenzise isitini, i-sandbag noma ezinye izinsimbi ezizungeze izinhlangothi ukuqinisa ukuqina.
Ukuvuselelwa kwekhava enobukhulu obungu-2 enezikhala zokuqinisa obunjwe kuyo, kuvikela izitshalo emvuleni, elangeni nasekhahleni olukhanyayo vumela ukukhanya kwelanga kube ngama-85%. Idizayini yekhava enwetshiwe inikeza ukuvalwa okungcono ngomswakama ophezulu kanye nokushisa kwezitshalo.Qoqa zonke izitshalo zakho endaweni eyodwa, evikelekile ekusiza ukuthi ukhule futhi uphathe izitshalo unyaka nonyaka nesihlangu sezithelo, imifino nezimbali ezivela ezintweni ezinokhahlo.
Isicabha sangaphambili se-zippered front kanye nama-vents ayi-12 eqeda enzelwe ukufakwa umoya omncane nokungena ngezinsuku ezishisayo. Isembozo esigcwele esivaliwe sigcina amazinga aphezulu omswakama wokutshala izitshalo ezishisayo, imifino, izitshalo ezinezithelo namakhambi.
Esedlule: Amatende Angaphandle Okuthengiswa Okushisayo Kwimicimbi Yephathi
Olandelayo: Amatende Emicimbi Yangaphandle Wholesale 6x12m
Ezolimo Zokugcina Imvelo
Izindawo zokugcina izithombo zepulasitiki